Misy ny Comfusion 3 | Avy amin'ny Linux
Ny kinova farany an'ny Fananahana, fizarana miorina amin'ny Ubuntu + Debian + Compiz + Fusion. Ity kinova ity dia misy fanatsarana vitsivitsy, indrindra raha ny momba ny fitaovam-pitaterana sy ny trinket hafa tadiavintsika rehetra. 🙂
ComFusion 3 dia fizarana miorina amin'ny Ubuntu Lucid Lynx, (kinova miorina amin'ny fanohanan'ny Ubuntu ankehitriny), izay mikendry ny hanatsotra ny Linux ho an'ny mpampiasa nobel izay avy amin'ny rafitra miasa hafa. Ny fanandramana izany, amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny programa, ny script ary ny fomba fijery, (compiz, xcompmgr, cairo-composite, sns), ny fampiasana Linux dia zavatra manintona kokoa, tsotra ary mahafinaritra kokoa ho an'ireo vao tonga ...
Amin'ny ComFusion 3, azo atao ny manana birao samihafa 3:
1.- Gnome-ComFusion: birao nentim-paharazana, saingy misy fanatsarana maro ho hitanao raha manohy mamaky an'ity rakitra ity ianao, dia miompana amin'ny solo-sainanao mahazatra izay tsy manana olana ara-pitaovana be loatra.
2.- Lxde-ComFusion: birao iray izay mitovy endrika amin'ny Gnome, fa manolo an'i Nautilus amin'ny Pcmanfm, ny tontonana Gnome avy amin'i Lxpanel, fa mamela an'i Metacity ho mpitantana varavarankely, izay manatsara ny fahombiazany betsaka, dia miasa tanteraka miaraka amin'ny compiz izay mampiavaka azy avy amin'ny maha birao LXDE voalohany misy effets compiz dia tonga lafatra ho an'ny solosaina manana loharanom-bola voafetra kokoa.
Ny Comfusion dia mampifangaro an'i Lxde sy Gnome amin'ny alàlan'ny fanovana ny mpitantana varavarankely Openbox ho Metacity, ahafahana mampiasa ComPiz miaraka amin'ny LxDE. Ny valiny farany dia birao maivana izay mampiasa Pcmanfm ho mpitantana ny rakitra, LxPanel ho toy ny tontonana Desktop, ary Metacity miaraka amina toerana mahazatra ho mpitantana ny varavarankely.
3.- Openbox-ComFusion: birao mitovy endrika amin'ireo zokiny lahy saingy miaraka amin'ny Openbox amin'ny maha mpitantana azy, novainaina sy novaina ho maivana indrindra, dia mampiasa ny Cairo-Composite ho toy ny effet visual default, ka na ireo birao feno fanetren-tena aza dia afaka mankafy kely misehoseho kokoa.
Ny Comfusion dia misy Openbox remastered tanteraka mba hahatonga azy io ho "azo ampiasaina" kokoa, ary "azo alamina". Izy io koa dia manana ny mpanelanelana amin'ny Xmbc, namboarina tamin'ny hoditra vaovao.
Izany rehetra izany, tsy misy very, na dia kely aza ny herin'ny hery, ny hakingana ary ny fahamendrehana omen'ny rafitra Linux miorina amin'ny Ubuntu.
Ampidino ny Comfusion 3
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Misy ny Comfusion 3
Josue Barrios dia hoy izy:
nampisafotofoto ahy izany ... XD
Valiny tamin'i Josue Barrios